Umvalelo ucekela phansi abaculi baseThekwini | Scrolla Izindaba
U-Club DJ nomculi womculo we-electro uSbi Techn, wasuka e-Krugersdorp waya eThekwini ukuze asondele kubalandeli bakhe.
Phela iTheku, seliphenduke ikhaya lomunye umculo omnandi eNingizimu Afrika.
Kepha-ke ubhubhane lwe-Coronavirus kanye nomvalelo kushintshe yonke into.
Ngesikhathi efika okokuqala eThekwini ngoMasingana wonyaka wezi-2019, ukukhathazeka okukhulu kwaSbi Techn, ukuthi abanye babekholelwa ukuthi isitayela sakhe somculo we-electro ngeke sisimame edolobheni elidume ngomculo wokudansa iGqomu.
“Kodwa phakathi nesonto lami lokuqala ngaba ne-gig kwenye yamakilibhu amakhulu,” kusho yena. “Emasontweni amabili ngemuva kwalapho ngaba nama-gig amane ngempelasonto.
“Bengiwenza kahle umsebenzi wami. Abakwa-Hunter’s kanye ne-Durban Poison bebengabaxhasi bami yize kwase kuphele unyaka kuphela ngifikile, ”kusho uSbi Techn, owayenza imali eyizinkulungwane ezingama-R30,000 ngenyanga ngaphambi komvalelo.
ITheku seliphenduke ikhaya lomculo – kusuka kwiGqomu, i-Durban House kuya emisindweni yomculo wesizwe samaZulu uMaskandi.
Abaculi abadumile abaphuma eThekwini – singabala iRudeboyz, iDistruction Boyz, uNasty C, uBlack Coffee noDJ Lag – bonke sebebeke iNingizimu Afrika ebalazweni lomculo lomhlaba.
Kodwa umvalelo uye waholela ekutheni abaculi abasha abaningi abanethalente edolobheni balambe futhi bahlupheke.
Ngesonto eledlule abaculi abangama-32 bavele enkantolo yase-Pinetown ngokwephula imithetho yomvalelo emigaqweni ngokuphikisana nemikhawulo yamakilabhu.
USbi Techn usesizwa ukuhambisa abafundi esikoleni – nangokwenza imisebenzi ye-IT komakhelwane e-Klaarwater.
Uphoqeleke ukuthi asuke efulethini lakhe elisenkabeni yedolobha ngoNhlaba ngemuva kokuthi engasenamali yokukhokha irenti. Manje uhlala nomndeni kayise asanda kuwuthola.
“Ngize ngaba necebo lokukhipha i-albhamu. Ngaba nabaxhasi abakulungele ukungeseka – kodwa konke lokho kushintshile
“Imicimbi angeke ibe nabantu abangama-50 – angeke senze nzuzo – empeleni sizolahlekelwa yimali.
Abaculi bafuna isibalo sabantu sibe ngamaphesenti angama-70 esikhundleni sabantu abangama-50 kuphela ..
“Ngisho umthamo wephesenti elingama-70 mncane,” kusho uSbi Techn.